Idumela Informant - Idumela Informant kuhlanganisa ezihlukahlukene izici ukuqapha imeyili lakho idumela. Enye yezinto ezidume kakhulu kufayela le- 250ok Isixazululo ngesabo inethiwekhi yesicupho esigaxekile semikhakha engaba yizigidi ezingama-35. Ukufinyelela kule datha kuyisicefe kubathengisi be-imeyili. Usayizi nekhwalithi yenethiwekhi yesicupho sogaxekile, nokufinyelela okuyimbudumbudu kuleyo nkathi yesikhathi sangempela (isb., Izingibe ezigoqwayo emini, i-IP, isizinda, ulayini wezihloko, izwe), kukhanga kakhulu kimi njengomthumeli. Ukuqashelwa kwabantu abamnyama? Le datha itholakala ngesikhathi sangempela, futhi ungasetha izexwayiso ezenziwe ngezifiso ukugxila ezinhlwini ezikukhathaza kakhulu. Ngikuthanda ukuguquguquka ekwenzeni ngokwezifiso ukuthi ngubani othola isexwayiso nokuthi leso sixwayiso silethwa kanjani (isb., I-imeyili, i-SMS).
Inbox Informant - Abakhangisi badinga amathuluzi wesikhathi sangempela asezingeni eliphezulu ukubasiza ukuthi bafike ebhokisini lokungenayo. I-Inbox Informant ikukhombisa ukuthi ingakanani imeyili yakho efinyelele kubhokisi lokungenayo, ugaxekile, nokuthi ilahleke kangakanani. Ungaphula izingqinamba ezithile zokulethwa kwe-imeyili ngomkhankaso, okusiza kakhulu. Omunye umehluko omkhulu engiwubonile phakathi 250ok futhi i-Return Path ingumnikelo wohlu lwenzalo lwama-250ok. Ngaphambi kokubanjwa ngokuqhathanisa ukumbozwa, izimbewu kuphela ezibalulekile kubahlinzeki bebhokisi leposi lapho uthumela khona imeyili. Isikhathi. 250ok wakhe ithuluzi le-seedlist optimizer ukukusiza ukuthi ungene ngaphakathi kubabungazi ababalulekile. Sekukonke, kukhona umehluko omncane ekusakazweni kohlu lohlu lwezinkampani zombili izinkampani eziphethe imbewu ekhethekile, kepha kukhona okufana nalokho kuyo yonke imicimbi emikhulu. Zombili lezi zinkampani kungenzeka zinakho okudingayo noma okuzokuthola.
I-imeyili Informant - Emhlabeni oqhutshwa yidatha, ama-open nama-CTR awayitsheli indaba ephelele. Ukusebenzisa i-pixel yokulandela ngomkhondo engu-250ok nge-imeyili Informant ikutshela ukuthi obani ababhalisile abafunda umyalezo nokuthi isikhathi esingakanani, nokuthi hlobo luni lwedivayisi nohlelo lokusebenza abebelusebenzisa. Yikuphi ukuxhumana noma ama-CTA asebenze kahle kakhulu? Ngabe uzithuthukisa izikhathi zokuthumela? I-imeyili Informant ikusiza ukuthi uqonde ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini engekho ukuze wenze izinqumo ezihlakaniphile, nezisheshayo.
Idizayini Informant - Wonke umthengisi we-imeyili udinga ukwenza ukuhlolwa kwangaphambi kokundiza kuzungeze ukwakheka, ngakho 250ok inokuhlanganiswa okungaphandle kwebhokisi nabathengisi abaholayo abahamba phambili Thumela i-imeyili ku-Acid futhi I-Litmus. I-Design Informant ihlola ukudala kwakho ngokuqhathanisa nezihlungi ezivamile zogaxekile kufaka phakathi iBarracuda, iSymantec, iSpam Assassin, i-Outlook, nokunye okuningi ukuze ukwazi ukubona nokulungisa izimbangela zogaxekile ngaphambi kokufaka umkhankaso wakho.